Mpitolona Nafana Fo Sady Tsy Nino An’Andriamanitra | Diary 2015
TANTARANY Tsy nino an’Andriamanitra izy taloha. Efa 50 taona izy izao no nanompo an’i Jehovah.
MBOLA tovolahy aho dia efa diso fanantenana tamin’ny fivavahana. Fankahalana foana mantsy no nanjaka tao amin’izy io hatramin’izay. Tsy azoko koa hoe nahoana Andriamanitra no tsy manafoana ny fahantrana sy ny tsy rariny, ary nahoana ny mpivavaka maro no tsy manaraka izay lazain’ny Baiboly. Tofoka aho ka tsy nino an’Andriamanitra intsony. Nieritreritra aho hoe tolom-bahoaka ihany no hanova an’izao tontolo izao.
Nanomboka namaky Mifohaza! aho tamin’ny 1962, ary nanaiky hianatra Baiboly niaraka tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’ny 1963. Nisy vokany be tamiko ny zavatra nianarako. Fantatro hoe tsy avy amin’Andriamanitra ireny habibiana ataon’ny fivavahana ireny. Manana fikasana tsara ho an’ny olombelona kosa izy. Efa niresaka ny zavatra nianarako tamin’ny olona aho, roa volana taorian’ny nianarako. Anisan’izany ny hoe hisolo an’ity tontolo ratsy ity ny Fanjakan’Andriamanitra. Vita batisa aho tamin’ny 1964 ary voatendry ho mpisava lalana manokana tamin’ny 1966. Tena namonjy ny aiko ny fahamarinana. Maro tamin’ireo tovolahy mpiara-mitolona tamiko mantsy no maty tamin’ny fomba nahatsiravina, na nigadra, na nandositra tany an-tany hafa. Misaotra an’i Jehovah aho satria nanova ahy izy. Manana fanantenana aho izao fa tsy toy ny taloha intsony. Niova aho ka lasa manompo Andriamanitra iray, izay mampanantena tontolo vaovao hanjakan’ny fahamarinana.
Juan Crispín, mitarika fotoam-pivavahana maraina ao amin’ny Betela